आज मूल्य बढ्यो केही देशको, हेर्नुहोस कुन देशको कति पुग्यो ? – दैनिक नेपाल न्युज
आज मूल्य बढ्यो केही देशको, हेर्नुहोस कुन देशको कति पुग्यो ?
काठमाडौं । आज यूके पाउण्डसहित केही देशको भाउ बढेपनि अमेरिकी डलरसहित प्राय देशको मूल्य भने ओरालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्रबैकंले आजका लागी तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११४ रुपैयाँ रहेको छ भने बिक्रिदर ११४ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४५ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रिदर १४६ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ ।युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ। मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ १८ पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ।
मध्यपुरथिमिमा बलेरोको ठक्करबाट एक महिलाको गयो ज्यान